प्रश्न र उत्तर – व्यापार – FX-परामर्शदाता
Q: म एक साईट व्यापारी हुँ. म के ज्ञान गर्नुपर्छ व्यापार तपाईंको सिस्टम प्रयोग?
एक: मात्र आधारभूत ज्ञान आवश्यक छ. तपाईं एक निश्चित मुद्रा जोडी को चार्ट खोल्न आवश्यक छ. बाँकी प्रयोगकर्ता गाइड मा ठूलो विवरण मा वर्णन गरिएको छ.
Q: म केहि नयाँ सिक्न हुनेछ?
एक: तपाईं बाँकी आदेश राख्न सक्षम. कि बाहेक, प्रणालीले तपाईंको ध्यान आवश्यक छैन, त्यसैले तपाईंलाई बजार आफ्नो विदेशी मुद्रा कौशल अध्ययन र सुधार सुरक्षित समय खर्च गर्न सकेन.
Q: तपाईंको सिस्टम संकेत कति पठाउँछ? म निरन्तर कम्प्युटर अगाडि बस्न संकेतको प्रतीक्षा गर्न आवश्यक हुनेछ?
एक: प्रणाली एक विशेष समयमा एक दिन एक पटक संकेत दिन्छ. त्यसैले, त्यो समय मा तपाईं के गर्न आवश्यक सबै चार्ट मा नजर छ, निर्णय र स्थान आदेश बनाउन. तेस पछि, यसलाई तपाईंको ध्यान को धेरै सानो आवश्यक हुनेछ, ब्रेक मा अर्डर स्थानान्तरणका लागि बाहेक समेत.
Q: म साँच्चै बाटो आफ्नो विदेशी मुद्रा प्रणाली मेरो ई-मेल गर्न संकेत पठाउने गरिएको छ मनपराएका. को विदेशी मुद्रा बक्स सही नै कुरा गर्नेछन्?
एक: त्यहाँ लागि कुनै आवश्यकता छ. विदेशी मुद्रा विपरीत, को विदेशी मुद्रा बक्स संकेत ठीक निर्दिष्ट समयमा उत्पन्न गरिन्छ.
Q: तपाईं प्रणाली संग काम गर्दछ कि2मुद्रा जोडी. म अन्य जोडी संग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
एक: तपाईंले यसलाई प्रयास गर्न सक्छ, तर तपाईं तल हामी पहिले नै ढाकिएको गर्नुभएको बाटो जाँदैछ छौँ.
प्रणाली EURUSD र USDCHF जोडी संग विशेष काम गर्दछ जब सबैभन्दा स्थिर परिणाम केही देखाइएको छ. कम स्थिर अझै पनि लाभदायक संकेत हुनत USD जोडी संग अवलोकन थिए (i.e. GBPUSD, USDJPY, आदि) हामी तपाईंलाई USD छैन भनेर जोडी हाम्रो सिस्टम प्रयोग गर्न खोज्नु सल्लाह छैन (i.e. CADCHF, GBPJPY, आदि).
Q: म केही पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ. जब म एक इन्फोर्मर खरिद म एक रोबोट एक छुट पाउने आशा गर्न सक्छन्? र पनि, मेरो बचत को हदसम्म के हुनेछ?
एक: तपाईं अगस्ट 1st अघि हाम्रो इन्फोर्मर खरीद भने, तपाईँलाई एउटा उपहार रूपमा रोबोट प्राप्त हुनेछ.
Q: म फरक विकासकर्ताहरूले केही मार्गदर्शन प्रणाली भयो. तिनीहरूलाई केही विभिन्न लाइनहरु को एक भीड छ, स्तर, रेखांकन, surges / spikes र अवधि. यी सबै ग्राफिक तत्व को संयोजन इनपुट र आउटपुट दुवै मा संकेत दिन्छ. तपाईं विचार छैन संकेतक को ठूलो संख्या, तपाईं प्राप्त अधिक सही संकेत?
एक: हामी त लाग्छ छैन. Oftentimes, तपाईं धेरै संकेतक बेचिएको भइरहेको गर्दा. त्यस पछि, माथि-उल्लेख संकेतक को संयोजन प्रयोग, तिनीहरूले आफ्नो आफ्नै संकेत पाउन तपाईं सोध्न. यो अत्यधिक संकेत छ र मात्रा उत्पादनको विकासकर्ता अल्छी छ र व्यापारी समायोजित गर्न ख्याल गर्दैन कसरी बोल्छ. ठीक विपरीत, हाम्रो व्यापारीहरु बारेमा हेरचाह अन्य सबै विकासकर्ताहरूले हामीलाई अलग सेट कस्तो छ. हामी सधैं हाम्रो उत्पादनहरु अत्यन्तै बाहिर मा सरल बनाउन प्रयास – वास्तबमा, यति सजिलो, कि पनि शुरुवात व्यापारी सजिलै तिनीहरूलाई बाहिर अर्थमा बनाउन सक्छ.
Q: म बाँकी रहेको आदेश राखिएको कहिल्यै गर्नुभएको. यो तपाईंको सफ्टवेयर खरीद मलाई रोक्छ भन्ने मात्र कुरा हो. यसलाई कसरी जटिल छ?
एक: यदि भनेर रोक्छ भन्ने मात्र कुरा हो, चिन्ता नगर्नुहोस्. यो धेरै सरल छ. सम्पूर्ण चरण-चरण प्रक्रिया प्रयोगकर्ता गाइड मा वर्णन गरिएको छ. तपाईँले यसलाई मा सिक्नेछौं 1 मिनेट।. तथापि, तपाईं फेला यदि यो केहि गाह्रो स्वयं आदेश राख्न, तपाईं मुक्त लागि हाम्रो रोबोट प्राप्त गर्न सक्छ र यो तपाईं को लागि आदेश ठाँउ सक्छ — तपाईं एक मुद्रा खर्च भनेर केही.
यसलाई सरल बनाउन: अगस्त 1st अघि इन्फोर्मर किन्न, 2011, यो परीक्षण र सिस्टम छ बस कसरी लाभदायक आफैलाई प्रमाणित र अगस्ट 1st पछि, तपाईं पूर्ण तपाईं नि: शुल्क रोबोट प्राप्त हुनेछ.
Q: रोबोट काम भनेर मुद्रा जोडी के हुन्?
एक: तिनीहरूले इन्फोर्मर लागि जस्तै हो – EURUSD र USDCHF
Q: तपाईंको प्रस्ताव म सबै स्तर प्राप्त भन्छन्: प्रारम्भिक मूल्य, हानि रोक्न र लिनुहोस् लाभ. मात्र कुरा छुटेको, जो मेरो विचारमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ: छ म सुझावको प्राप्त हुनेछ – जो दिशा मा म मेरो अर्डर गर्नुपर्छ. प्रणाली संकेत पठाउने - म बेचन वा आदेश किन्नुहोस खोल्न गर्नुपर्छ?
एक: हो, को पाठ्यक्रम. आदेश खुला अघि, तपाईं सबै आवश्यक जानकारी छौँ. आदेश खोल्न कसरी वा सबै अवस्था ठूलो विवरण वर्णन गरिएको र संकेत स्पष्ट छन्, संक्षिप्त र बुझ्न सजिलो.
Q: तपाईं संकेत सही नै प्रत्येक दिन म व्यापार समयमा आइपुग्दा कि. छ कि दुनिया भर सही नै समय? मान्छे फरक समय क्षेत्र र वाहेक बाँच्न, सबै दलाल आफ्नो टर्मिनलहरु मा विभिन्न समय देखाउन. म यसलाई मेरो अर्डर राख्न सबैभन्दा राम्रो समय जब तरिका गणना गर्न आवश्यक हुनेछ?
एक: कुनै, त्यसो गर्न तपाईंलाई हुनेछैन. प्रणाली स्वचालित रूपमा GMT आदर आफ्नो टर्मिनलहरु 'समय बीचको फरक गणना हुनेछ र स्वतः तपाईंको टर्मिनल समय भिज्न हुनेछ. हामी हाम्रो प्रणाली अत्यन्तै सबै व्यापारीहरु लागि सरल बनाउन प्रयास गर्नुभएको. तपाईं कुनै पनि प्राविधिक प्रश्नहरु को साथ आफ्नो मस्तिष्क तहसनहस गर्न हुनेछैन.
Q: म एक अनौठो सूचक प्रयोग. जब म चार्ट मा राखिएको र इतिहास हेर्नुभयो, यो यस्तो अद्भुत सूचक निःशुल्क उपलब्ध थियो कसरी आउन त स्पष्ट र म सोच थियो सरल सबै थियो? त्यसपछि म आफ्नो संकेत आधारित यो संग व्यापार गर्ने प्रयास, तर तिनीहरूलाई निरन्तर परिवर्तन हुनेछ. एकछिन अघि यो देखाए खुला किन्नुहोस. म गरे, तर जस्तै नै म यो जस्तै, यसलाई तत्काल बेचन देखाउन हुनेछ.
म आफ्नो संकेतक संग नै सटीक समस्या सामना गर्नेछ? आफ्नो परिणाम सधैं लगातार छन्?
एक: तपाईं वर्णन Repainting भनिन्छ के. दुर्भाग्यवश, "Repaint" बजार मा संकेतक को बहुमत के. तथापि, तपाईं हाम्रो संकेतक संग कुनै पनि समस्या पत्ता लगाउन छैन.
तिनीहरूले एक रक रूपमा ठोस छन्!
Q: यो उत्पादन पनि बस आफ्नो सबै अघिल्लो उत्पादनहरु जस्तै एक म्याद समाप्त हुने मिति हुनेछ?
एक: हो. बित्तिकै आफ्नो उत्पादन तपाईं जानकारी रूपमा यसलाई समाप्त भएको छ, हामीलाई एक पंक्ति ड्रप कृपया र हामी तुरुन्तै तपाईं असीमित संस्करण पठाउने. यो आकस्मिक बेईमान ग्राहकहरु हामीलाई सुरक्षा, जो हाम्रो 30-दिन फिर्ती नीति शोषण, र पछि पूर्ण फिर्तीको प्राप्त, हाम्रो उत्पादनहरु प्रयोग गर्न जारी.
Q: कति खाता म संग आफ्नो उत्पादन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
एक: तपाईं एक मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ (1) बाँच्न र5डेमो खाता. तपाईं खाता ठूलो संख्यामा हाम्रो उत्पादन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईं सफ्टवेयरको थप एक प्रतिलिपि खरीद गर्नको लागि एक अतिरिक्त छुट प्राप्त.
Q: जो हानि रोक्नुहोस् र म राख्दै गर्नुपर्छ लाभ लिनुहोस्?
एक: लाभ सधैं fixated छ र यो प्रयोगकर्ता गाइड मा वर्णन गर्नुपर्छ लिन. स्टप हानि हाम्रो सूचक द्वारा सुझाव गरिएको गरिनेछ.
Q: म कति बारेमा एक महिना मेरो जम्मा वृद्धि आशा गर्न सक्छौं द्वारा, तपाईंको sofware प्रयोग?
एक: यो सबै आफ्नो प्रारम्भिक निक्षेप रकम निर्भर, मा जोखिमपूर्ण कसरी आफ्नो व्यापार शैली छ र, को पाठ्यक्रम, बजार नै मा. वर्तमान बजार अवस्था मा भविष्यवाणी गर्न कठिन छ. यो हरेक दिन यूरो क्षेत्र आर्थिक shockwaves महसुस होइन र एकतामा बाँध्ने राज्य एक प्राविधिक पूर्वनिर्धारित को कगार मा छ. तैपनि, हामी दृढ हाम्रो प्रणाली धेरै रूपमा आफ्नो खाता उकास्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन् 50% प्रति महिना conservatively व्यापार भने.
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा- तपाईं प्रदर्शन पहिलो खातामा सधैं सिस्टम परीक्षण. बारेमा एक महिना परीक्षण अवधि मा हामी प्रस्ताव, तपाईं प्रणालीको स्थिरता र लाभकारी बारेमा एउटा धारणा गठन छौँ. बराबरी, तपाईं सिस्टम भने निष्कर्षमा पुग्न हुनेछ, जे भएपनि, तपाईं को लागि छ र आफ्नो आवश्यकता मिल्दो. त्यस पछि, तपाईं सुरक्षित एक प्रत्यक्ष खातामा व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
Q: जो दलाल तपाईंको सिस्टम सबैभन्दा उपयुक्त छ?
एक: तपाईं आफ्नो विवेक कुनै पनि दलाल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ब्रोकर प्रयोग MetaTrader4 प्रणाली छ छ, विदेशी मुद्रा निलो पेटी कि वातावरण भित्र कडाई संचालित देखि.
Q: म आफ्नो उत्पादनहरु को लगभग सबै भयो. केही उत्पादनहरु मेरो लागि राम्रो काम, अरूलाई त ठूलो छैन. तथापि, म मेरो शैक्षिक प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता को लागि धन्यवाद गर्न चाहनुहुन्छ. आफ्नो इमेल धन्यवाद, म धेरै अनुभवी बन्न गर्नुभएको, स्मार्ट र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, calmer.
म आफ्नो वफादार ग्राहक रूपमा छुट कुनै प्रकारको मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ?
एक: पहिले, मुरी मुरी धन्यवाद. हामी अत्यधिक हाम्रो वफादार ग्राहकहरु मोल र सधैं तिनीहरूलाई सबै भन्दा राम्रो खरिद विकल्पहरू केही प्रस्ताव. को पाठ्यक्रम, तपाईं छुट प्राप्त. विवरण र अवस्थाको केही साइट मा अन्यत्र वर्णन गरिएको.
हाम्रो ग्राहक रूपमा जारी राख्न र आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई प्रस्ताव. यसले हामीलाई हाम्रो विकास मा एक महान सम्झौता गर्न मद्दत गर्छ.
Q: तपाईंको सिस्टम प्रयोग गर्न सुरू गर्न आवश्यक न्यूनतम जम्मा के हो?
एक: एक जम्मा $300 मानक धेरै काम गर्न आवश्यक छ (बाट 0.1). तथापि, तपाईंको जम्मा कम छ भने, तपाईं microlots usilize सक्छ. microlots बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न, कृपया आफ्नो दलाल सम्पर्क.
Q: तपाईं प्रणाली Trailingator सँगसँगै प्रयोग गर्न सकिएन भनेर लेखे. यसले के गर्छ? पनि, म आफ्नो विदेशी मुद्रा निलो पेटी साथ सँगै Trailingator खरीद यदि म छुट प्राप्त हुनेछ?
एक: हाम्रो अनुमान मा, व्यापार गरेको लाभकारी बारेमा द्वारा Trailingator बढ्छ उपयोग 20-25%. स्वाभाविक, तपाईं Trailingator खरिद गर्दा तपाईं छुट प्राप्त.